Shirkad Swedish ah oo markab looga heysto Iran. Gabdhaha oo kaga wanaagsan wiilasha xagga iskuulka. Dawooyin laga digay. en SRI Somaliska en mp3(22/07 a las 17:30:08) 02:32 38794198 - iVoox
A continuación: Boris Johnson oo loo doortay ra'iisal wasaaraha UK. Weerarada mindiyaha oo kor u kacay. Dadka Swedish ee ku waasha di... Cancelar 10
Descripción de Shirkad Swedish ah oo markab looga heysto Iran. Gabdhaha oo kaga wanaagsan wiilasha xagga iskuulka. Dawooyin laga digay.